ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး ရောင်ခြည်တော် ကွန့်မြူးနေသော ဗွီဒီယို ဖိုင်ထွက်ပေါ် – GuGuGarGar
ဗွီဒီယို ဖိုင် ကို စာပိုဒ်အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ ဗွီဒီယိုဖိုင် မကြည့်ခင် ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းလေးကို ဖတ်သွား လိုက်ပါအူးနော်…။
(၁၈၃၀) ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် ရဟန်းပညာရှိ၊ ပုဏ်ဏ္ဍား ပညာရှိ၊ လူပညာရှိ တို့ဝိုင်းဝန်း ရေးသားပြုစုခဲ့သော မှန်နန်းမဟာရာဇဝင်တော်ကြီး ၌ ဖော်ပြချက်အတိုင်း ရွှေတိဂုံဘုရားကြီး စတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံကို ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်၊ဗုဒ္ဓဝင်တော်အရ လွန်လေပြီးသော နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်ခန့်က သိဒ္ဓတ္တ မင်းသားသည် သစ္စာလေးပါးကို သိမြင်တော်မူပြီးသည့်နောက် ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့လေသည် ။
(၁) ဒုက္ခအရိယ သစ္စာ ( ဆင်းရဲခြင်းဟူသောအမှန်တရား ) (၂) ဒုက္ခသမုဒယအရိယ သစ္စာ (ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်း အမှန်တရား) (၃) ဒုက္ခနိရောဓအရိယ သစ္စာ (ဒုက္ခ၏ချုပ်ရာ အမှန်တရား) (၄) ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနီပဋိပဒါအရိယ သစ္စာ (ဆင်းရဲချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်းအကျင့်ဟူသော အမှန်တရား) ဟူ၍ဖြစ်ပေသည်။
မွန်တို့ဌာနေ အသိဉ္စနမြို့မှလာသော တဖုဿ နှင့် ဘလ်္လိက ခေါ် ကုန်သည်ညီနောင် နှစ်ဦးတို့သည် ရေလမ်းခရီးမှကုန်များကိုတင်ဆောင်လာပြီးနောက် ကုန်လှည်း အစီးငါးရာဖြင့် ကုန်အရောင်းအဝယ်ပြုရန် ထွက်လာကြလေသည်ဤသို့ဖြင့် လင်းလွန်းပင်ရင်း၌ သတင်းသုံး ထိုင်နေတော်မူနေသော မြတ်စွာဘုရားရှင် ရှိရာအရပ်သို့ ရောက်ရှိလာကြလေသည်။ ထိုအချိန်သည် မြတ်စွာဘုရား ဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်ရှိပြီး ၄၉ရက်ကြာကာလဖြစ်သည်။ ညီနောင်နှစ်ဦးမှ ဘုရား ရှင်အား ပျားမုန့်ထုပ်များကပ်လှူကြလေသည်။
ဘုရားရှင် မုန့်များကိုသုံးဆောင်ပြီးသည့်နောက် ညီနောင်နှစ်ဦးတို့သည် ဘုရားရှင်ထံမှ လက်ဆောင်ကိုတောင်းခံကြလေ၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည်ဆံတော် (၈)ဆူကို ဦးခေါင်းတော်မှ လက်တော်ဖြင့်သပ်ယူကာ ပေးသနားတော်မူလေသည်။ မြတ်စွာဘုရား၏ဆံတော်တစ်ဆူစီသည် မဇ္ဈိမဒေ​သ​တိုင်းတာနှုန်းအရ လက်ရှစ်သစ် (သို့) (၆) လက်မဝန်းကျင်ခန့် အရှည်ရှိကြ၏၊၊
ထို့နောက် ညီနောင်နှစ်ဦးသည် ဆံတော်များကို ပတ္တမြားကြုတ်အတွင်းသို့ထဲ့ပြီး လာရာလမ်းအတိုင်း လှည်းများ လှေများ ဖြင့် ပင့်ဆောင်သွားကြသည်။လမ်းခရီး၌ အဇ္ဈတ္တန ပြည်သို့အရောက်တွင် မင်းကြီးမှနေ၍ဆံတော်နှစ်ဆူကိုတောင်းခံ ရယူခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် ရေလမ်းဖြင့် ဆက်လက်ခရီးနှင်လေရာ မြန်မာပြည်တောင်စွန်းရှိ နေဂရိသက် အငူသို့ ရောက်ရှိ သောအခါ ဇေယျသေနအမည်ရှိ နဂါးမင်းကလည်း ဆံတော်နှစ်ဆူကို အလှူခံပြီး နာဂပူရနဂါးပြည်သို့ သယ်ဆောင်သွားလေသည်။
ကျန်ရှိသော ဆံတော် (၄) ဆူထည့်ထားသည့် ပတ္တမြားကြုတ်ကို ပုလဲများအသုံးပြု၍ စေတီပုံစံတည်ထားကြောင်း ညီနောင်နှစ်ဦးမှ ဥက္ကလာပမင်းကြီးထံ သတင်းကောင်းပါးလေသည်။ ထိုအခါမင်းကြီးသည် ဆင်၊မြင်း၊ စစ်ရထား နှင့် ခြေလျင်တပ်တို့ ဝန်းရံလျှက် ရောက်ရှိလာပြီး ပုလဲစေတီတော်ကို သစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ပြုကာ ရိုသေမြတ်နိုးစွာဖြင့် လက်ယာရစ် လှည့်လည်ပူဇော် လေသည်။ မင်းကြီးပြုသော သစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ကြောင့် ဆံတော်များပွားလာကာ နဂိုရှိသော ပမာဏအတိုင်း (၈)ဆူပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်သွားလေသည်။
ထို့နောက် မင်းကြီးနှင့် ညီနောင်နှစ်ဦးတို့သည် ဆံတော်မြတ်များကို သယ်ဆောင်ပြီး အသိဉ္စနမြို့သို့ပြန်ကြလေသည်။ သက္က သကြားမင်း၊ ဥက္ကလာပ မင်းနှင့် ညီနောင်နှစ်ဦးတို့သည် ဆံတော်ရှစ်ဆူကို ယခင်ပွင့်ခဲ့ပြီးသောဘုရားသုံးဆူ၏ အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများဖြစ်သော ကကုသန် ဘုရား၏ တောင်ဝှေးတော်၊ ကောဏာဂုံဘုရား၏ ရေစစ်တော် ကဿပ ဘုရား၏ ရေသနုပ်တော် တို့နှင့်အတူ အသိဉ္စနမြို့၏အရှေ့ဘက်တွင်ရှိသည့်သိင်္ဂုတ္တရကုန်းတော်ပေါ်တွင် စေတီအဖြစ် တည်၍ ထည့်သွင်း ဌာပနာရန်သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြလေသည်ဌာပနာထည့်သွင်းခြင်းကို တပေါင်းလပြည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဌာပနာတိုက် တည်ဆောက်ရန်အတွက် ဇောက်(၄၄)တောင်၊အနံ (၄၄) တောင်ရှိသည့် ဥမင်လိုဏ် ခေါင်းတစ်ခုကို တူးခဲ့၏။ ဌာပနာတိုက်အတွင်းတွင် အမျိုးမျိုးသော ကျောက်မျက် ရတနာများကို ဒူးခေါင်း အထိမြှပ်အောင် ဖြည့်သွင်းခဲ့သည်။ ထိုရတနာများပေါ်တွင် ဌာပနာပစ္စည်းများ ထဲ့ထားသော ရတနာလှေကိုထားရှိလေသည် ရွှေကျောက်ဖျာကို ဌာပနာတိုက်၏အပေါ်မှဖုံးအုပ်စေ၍ (၄၄) တောင်အမြင့်ရှိ ရွှေရောင် တဝင်းဝင်းထနေသည့် စေတီကိုတည်ထားခဲ့လေသည်။ ထိုစေတီအပေါ်မှနေ၍ ငွေရောင်စေတီ၊ ထို့နောက် ရွှေနှင့်ကြေးနီရောစပ်ထားသောစေတီ၊ ကြေးညိုရောင်စေတီ၊ သံရောင်စေတီ၊ စကျင် ကျောက်စေတီတို့ဖြင့် ထပ်၍ထပ်၍ ငုံကာတည်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ရွှေကျောက်ဖျာကို ဌာပနာတိုက်၏အပေါ်မှဖုံးအုပ်စေ၍ (၄၄) တောင်အမြင့်ရှိ ရွှေရောင် တဝင်းဝင်းထနေသည့် စေတီကိုတည်ထားခဲ့လေသည်။ ထိုစေတီအပေါ်မှနေ၍ ငွေရောင်စေတီ၊ ထို့နောက် ရွှေနှင့်ကြေးနီရောစပ်ထားသောစေတီ၊ ကြေးညိုရောင်စေတီ၊ သံရောင်စေတီ၊ စကျင် ကျောက်စေတီတို့ဖြင့် ထပ်၍ထပ်၍ ငုံကာတည်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
မူရင်းရေးသားသူအား လေးစားစွာဖြင့် …. ပေသီး
ဗှီဒီယိုဖိုငျကို အောကျဆုံးတှငျ ဖျောပွထားပါသညျ…။ ဗှီဒီယိုဖိုငျ မကွညျ့ခငျ ရှတေိဂုံစတေီတျောမွတျကွီးရဲ့ သမိုငျးကွောငျးလေးကို ဖတျသှားလိုကျပါအူးနျော…။
၁၈၃၀ ပွညျ့လှနျနှဈမြားတှငျ ရဟနျးပညာရှိ၊ ပုဏျဏ်ဍား ပညာရှိ၊ လူပညာရှိ တို့ဝိုငျးဝနျး ရေးသားပွုစုခဲ့သော မှနျနနျးမဟာရာဇဝငျတျောကွီး၌ ဖျောပွခကျြအတိုငျး ရှတေိဂုံဘုရားကွီး စတငျပျေါပေါကျလာပုံကို ရေးသားထားခွငျးဖွဈသညျ၊ဗုဒ်ဓဝငျတျောအရ လှနျလပွေီးသော နှဈပေါငျး ၂၅၀၀ ကြျောခနျ့က သိဒ်ဓတ်တမငျးသားသညျ သစ်စာလေးပါးကို သိမွငျတျောမူပွီးသညျ့နောကျ ဘုရားအဖွဈသို့ ရောကျရှိခဲ့လသေညျ။
(၁) ဒုက်ခအရိယ သစ်စာ (ဆငျးရဲခွငျးဟူသောအမှနျတရား) ၂) ဒုက်ခသမုဒယအရိယ သစ်စာ (ဆငျးရဲဖွဈကွောငျး အမှနျတရား) ၃) ဒုက်ခနိရောဓအရိယ သစ်စာ (ဒုက်ခ၏ခြုပျရာ အမှနျတရား) ၄) ဒုက်ခနိရောဓဂါမိနီပဋိပဒါအရိယ သစ်စာ (ဆငျးရဲခြုပျရာသို့ ရောကျကွောငျးအကငျြ့ဟူသော အမှနျတရား) ဟူ၍ဖွဈပသေညျ။
မှနျတို့ဌာနေ အသိဉ်စနမွို့မှလာသော တဖုဿ နှငျ့ ဘလ်ျလိက ချေါ ကုနျသညျညီနောငျ နှဈဦးတို့သညျ ရလေမျးခရီးမှကုနျမြားကိုတငျဆောငျလာပွီးနောကျ ကုနျလှညျး အစီးငါးရာဖွငျ့ ကုနျအရောငျးအဝယျပွုရနျ ထှကျလာကွလသေညျဤသို့ဖွငျ့ လငျးလှနျးပငျရငျး၌ သတငျးသုံး ထိုငျနတေျောမူနသေော မွတျစှာဘုရားရှငျ ရှိရာအရပျသို့ ရောကျရှိလာကွလသေညျ။ ထိုအခြိနျသညျ မွတျစှာဘုရား ဘုရားအဖွဈသို့ရောကျရှိပွီး ၄၉ရကျကွာကာလဖွဈသညျ။ ညီနောငျနှဈဦးမှ ဘုရား ရှငျအား ပြားမုနျ့ထုပျမြားကပျလှူကွလသေညျ။
ဘုရားရှငျ မုနျ့မြားကိုသုံးဆောငျပွီးသညျ့နောကျ ညီနောငျနှဈဦးတို့သညျ ဘုရားရှငျထံမှ လကျဆောငျကိုတောငျးခံကွလေ၏။ ထိုအခါ မွတျစှာဘုရားသညျဆံတျော (၈)ဆူကို ဦးခေါငျးတျောမှ လကျတျောဖွငျ့သပျယူကာ ပေးသနားတျောမူလသေညျ။ မွတျစှာဘုရား၏ဆံတျောတဈဆူစီသညျ မဇ်ဈိမဒသေတိုငျးတာနှုနျးအရ လကျရှဈသဈ (သို့) (၆) လကျမဝနျးကငျြခနျ့ အရှညျရှိကွ၏၊၊
ကနျြရှိသော ဆံတျော (၄) ဆူထညျ့ထားသညျ့ ပတ်တမွားကွုတျကို ပုလဲမြားအသုံးပွု၍ စတေီပုံစံတညျထားကွောငျး ညီနောငျနှဈဦးမှ ဥက်ကလာပမငျးကွီးထံ သတငျးကောငျးပါးလသေညျ။ ထိုအခါမငျးကွီးသညျ ဆငျ၊မွငျး၊ စဈရထား နှငျ့ ခွလေငျြတပျတို့ ဝနျးရံလြှကျ ရောကျရှိလာပွီး ပုလဲစတေီတျောကို သစ်စာအဓိဋ်ဌာနျပွုကာ ရိုသမွေတျနိုးစှာဖွငျ့ လကျယာရဈ လှညျ့လညျပူဇျော လသေညျ။ မငျးကွီးပွုသော သစ်စာအဓိဋ်ဌာနျကွောငျ့ ဆံတျောမြားပှားလာကာ နဂိုရှိသော ပမာဏအတိုငျး (၈)ဆူပွနျလညျဖွဈပျေါသှားလသေညျ။
ထို့နောကျ မငျးကွီးနှငျ့ ညီနောငျနှဈဦးတို့သညျ ဆံတျောမွတျမြားကို သယျဆောငျပွီး အသိဉ်စနမွို့သို့ပွနျကွလသေညျ။ သက်က သကွားမငျး၊ ဥက်ကလာပ မငျးနှငျ့ ညီနောငျနှဈဦးတို့သညျ ဆံတျောရှဈဆူကို ယခငျပှငျ့ခဲ့ပွီးသောဘုရားသုံးဆူ၏ အသုံးဆောငျပစ်စညျးမြားဖွဈသော ကကုသနျ ဘုရား၏ တောငျဝှေးတျော၊ ကောဏာဂုံဘုရား၏ ရစေဈတျော ကဿပ ဘုရား၏ ရသေနုပျတျော တို့နှငျ့အတူ အသိဉ်စနမွို့၏အရှဘေ့ကျတှငျရှိသညျ့သိင်ျဂုတ်တရကုနျးတျောပျေါတှငျ စတေီအဖွဈ တညျ၍ ထညျ့သှငျး ဌာပနာရနျသဘောတူဆုံးဖွတျခဲ့ကွလသေညျဌာပနာထညျ့သှငျးခွငျးကို တပေါငျးလပွညျ့ ဗုဒ်ဓဟူးနတှေ့ငျပွုလုပျခဲ့ကွသညျ။ ဌာပနာတိုကျ တညျဆောကျရနျအတှကျ ဇောကျ(၄၄)တောငျ၊အနံ (၄၄) တောငျရှိသညျ့ ဥမငျလိုဏျ ခေါငျးတဈခုကို တူးခဲ့၏။ ဌာပနာတိုကျအတှငျးတှငျ အမြိုးမြိုးသော ကြောကျမကျြ ရတနာမြားကို ဒူးခေါငျး အထိမွှပျအောငျ ဖွညျ့သှငျးခဲ့သညျ။ ထိုရတနာမြားပျေါတှငျ ဌာပနာပစ်စညျးမြား ထဲ့ထားသော ရတနာလှကေိုထားရှိလသေညျ ရှကြေောကျဖြာကို ဌာပနာတိုကျ၏အပျေါမှဖုံးအုပျစေ၍ (၄၄) တောငျအမွငျ့ရှိ ရှရေောငျ တဝငျးဝငျးထနသေညျ့ စတေီကိုတညျထားခဲ့လသေညျ။ ထိုစတေီအပျေါမှနေ၍ ငှရေောငျစတေီ၊ ထို့နောကျ ရှနှေငျ့ကွေးနီရောစပျထားသောစတေီ၊ ကွေးညိုရောငျစတေီ၊ သံရောငျစတေီ၊ စကငျြ ကြောကျစတေီတို့ဖွငျ့ ထပျ၍ထပျ၍ ငုံကာတညျထားခွငျးဖွဈသညျ။
မူရငျးရေးသားသူအား လေးစားစှာဖွငျ့ …. ပသေီး